कुन बार कुन कपडा लगाउँदा शुभ हुन्छ? जान्नुहोस् – Paluwa Khabar
कार्तिक १७, २०७७ सोमबार 91
काठमाडौं ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसको रंगसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको छ। रंगले हाम्रो भावनालाई दर्शाउँछ। कुनै रंग देख्दा हामीलाई रिस उठ्छ त कुनै रंग देख्दा मन मा शान्ति मिल्छ।
त्यस्तै कुनै रंगले मानिसलाई उत्तेजित गर्छ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हरेक ग्रहको एक आफ्नै रंग हुन्छ जसले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पार्छ
रंगको सहि प्रयोगले पनि ग्रहको अशुभ प्रभावबाट बच्न सकिन्छ। यस्तोमा, हप्ताको हरेक दिन कुनै न कुनै रंगसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले प्रत्यक दिन बार अनुसारको रंगको कपडा लगाउँदा निकै शुभ हुन्छ।
Prevराजेश हमालले सुकुम्बासिलाई बाटे तिन कराेडकाे जमिन
Nextकाेराेनाका कारण ज्यान गुमाउनेकाे संख्या बढदाे, कहा कति हेर्नुहाेस
प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो, अदालतलाई सोध्नू, तपाइँलाई सोध्न नपरोस्: प्रधानमन्त्री [भिडियो
मास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ? (327)
८.	भारतिय कोच भन्छन् : ‘साफ च्याम्पियनसिप नेपालले नै जित्छ’ (41)